Adin’ny mpianatry ny lisea teknika Alarobia sy Mahamasina: voasakan’ny polisy ny fidinana an-dalambe sy fikasana hanao valifaty | NewsMada
Par Taratra sur 01/12/2021
“Fanadalana vehivavy niafara tamin’ny daroka sy herisetra”. Ireo no voalaza fa antony nahatonga ireo mpianatry ny lisea teknika Alarobia, saika hanao valifaty tamin’ny mpianatry ny lisea teknika Mahamasina, omaly.
Nanomboka ny faran’ny herinandro teo ny disadisan’ireo mpianatra avy eo amin’ireo lisea teknika etsy Alarobia sy Mahamasina. “Nisy hetsika natao tesy amin’ny lisea alarobia, tamin’izay, nanadala tovovavy mpianatra avy ao amin’ny lisea teknikan’i Mahamasina ny mpianatra tao Alarobia. Tsy vitan’izay fa mbola nokitihiny ihany koa ny fitombenan’io tovovavy io”, hoy ny fanazavan’ny mpianatra iray tetsy Mahamasina. Vokany, tezitra ireo tovolahy mpianatr’i Mahamasina, raikitra ny herisetra tamin’ireo mpianatry ny lisea Alarobia izay hitany. Mbola nitohy ny fifandonan’ny roa tonta teny akaikin’ny lisea Gallieni, afakomaly. Nisy ihany koa ny horonan-tsary naneho ny daroka nahazo io mpianatra io ary naparitaka tao amin’ny “facebook”. Tsy nahazaka ary nitroatra vao nahita izany ireo mpianatry ny lisea teknika Alarobia ka nampiomana ireo namono ny namany.
Tsy voafehy intsony
Taorian’ny ora fakan-drivotra, omaly maraina, nirohotra nivoaka ny vavahadin’ny lisea etsy Alarobia ireo mpianatra. Nanao rodobe hanafika eny amin’ny LTPGC Mahamasina. “Hamaly faty ny namany naratra mafy sy naboridana” no voalaza fa nampirehitra ny fo ka tsy zakan’ireo mpianatry ny lisea Alarobia. Nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany ireo mpampianatra. Nasaina niverina ihany koa ireo mpianatra ka nony tafiditra ny faritry ny sekoly dia tsy nahazo nivoaka. Tsy afaka nivezivezy intsony ireo mpianatra, ireo mpampianatra kosa tavela teo ivelan’ny vavahady.
Ravan’ny polisy teo Antanimena
Voasakan’ny polisy tsy lavitra ny Cecam Antanimena ireo mpianatra nikasa ho eny Mahamasina. Naparitaky ny mpitandro filaminana izy ireo ary nitsoaka nihazo an’Ankorondrano sy ireo toerana manodidina. Ma ro koa anefa ireo mbola nidrinkina ho eny Mahamasina ihany. Eaf niatrana manoloana ny lisea tetsy Mahamasina ihany koa ny zandary. Vantany vao naheno ny tranga, maro ireo ray aman-dreny naka ny zanany tetsy Mahamasina. Ireo mpianatry ny LTPGC kosa tsy nahazo nivoaka ny sekoly raha tsy tamin’ny 12 ora antoandro. Naato ihany koa ny fampianarana omaly tolakandro. Taorian’ny tranga, nisy ny fepetra noraisin’ny Proviseur roa tonta. Nisy ny fivoriana vonjimaika natao. Ao ireo nilaza fa tsy diso ilay horonan-tsary niparitaka tao amin’ny “facebook”. Ny polisim-pirenena kosa nanazava fa voa mafy ary mbola tsy mahatsiaro tena any amin’ny hopitaly ilay tovolahy voadaroka.
Tsiahivina fa tsy vao izao io disadisan’ireo mpianatry ny lisea roa ireo. Hatramin’izay no efa nifandramatra ny roa tonta ka izao niverina izao indray.